David Moyes: Wayne Rooney Waxa Uu Ku Soo Laaban Doonaa Everton. - jornalizem
David Moyes: Wayne Rooney Waxa Uu Ku Soo Laaban Doonaa Everton.
David Moyes ayaa shaaca ka qaaday in Wayne Rooney uu maalin uun ku laaban doono kooxdii uu ku soo baxay ee Everton.
Tababaraha Everton oo macalin u ahaa Rooney ka hor inta uusan u dhaqaaqin Man United 2004tii, ayaa amaanay 26 jirkaan kaasoo u dabaaldegaya sannadguuradiisii 10aad ee ka soo wareegtay markii ugu horeysay ee uu Premier League uu gool ka dhaliyo isagoo gool xusuus leh ka dhaliyay Arsenal.
Goolkaas uu dhaliyay Rooney ayaa ka dhigtay mid banaanka soo dhigtay tayadiisa iyo farsamdiisa kubada, waxaana waqtigaas ka dib uu shabaqa soo taabtay 144 gool oo horyaalka ah, isagoo ka mid noqday xiddigaha adduunka ugu caansan.
Isagoo u hadlayay Sky Sports Moyes ayaa qirtay inuu jeclaan lahaa inuu dib ugu soo dhaweeyo Goodinson Park ciyaaryahan Wayne Rooney, waxaana uu sidoo kale sheegay inuu weeraryahanka laftiisa uu u furan yahay fekerkaas.
“Hubaashii dib ayaan u soo dhaweyn lahaa Wayne. Waxa ay u badan tahay inuu kooxda ku soo laaban doono qeybaha danbe ee mustaqbalkiisa ciyaareed laakiin waxaan qabaa inay tahay wax uu isaga xitaa soo dhaweynayo.”
Moyes oo dib u xusuusanayay goolkaas caanka ah ee uu Rooney ka dhaliyay Arsenal shan maalmood ka hor inta uusan 17 jir noqon, ayaa waxaa uu ka hadlay sida jawiga uu ahaa ciyaarta ka dib.
“Waxaa jirtay afar ama shan jeer oo anigoo qolka labiska ku jira aan maqli karay taageerayaasha oo heesaya intii ay ku sii jeedeen guryahooda. Kulankaas Arsenal waa mid ka mid ah.
“Waxa ay arken wiil yar oo jidadka kubad ku ciyaari jiray, islamarkaana 16 jir ku soo galay garoonka, goolkaas guusha ahna ka dhaliyay Arsenal. Waxa uu ahaa mid iyaga ka mid ah.”